जन्मघरमा दुई घण्टा राखेपछि डा. देवकोटा काठमाडौं फिर्ता::Online News Portal from State No. 4
जन्मघरमा दुई घण्टा राखेपछि डा. देवकोटा काठमाडौं फिर्ता
घरमा पुगेर सिस्नेधाराको पानी खाने इच्छा गरेपछि उनलाई गोरखा ल्याइएको हो
गोरखा,२६ जेठ – बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचाररत वरिष्ठ न्युरो सर्जन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटालाई जन्मथलो गोरखा लगिएको छ। देवकोटाले गाउँकै सिस्नेधाराको पानी पिउने इच्छा व्यक्त गरेपछि उनलाई हेलिकप्टरबाट जन्मथलो लगिएको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
हेलिकप्टरमा गोरखा पालुङटारनगरपालिको बोहरागाउँमा पुर्‍याइएको थियो । बोहरागाउँबाट १० मिनेटको दूरीमा रहेको आँपपिपल पण्डितगाउँमा डाक्टर देवकोटाको पुर्खौली घर रहेको छ। उनले घरमा पुगेर सिस्नेधाराको पानी खाने इच्छा गरेपछि उनलाई गोरखा ल्याइएको हो।
पित्त थैलीको क्यान्सरबाट पीडित डाक्टर देवकोटाको कलेजोको भेट्नोमा मासु पलाएको (कोलोन्जियो कार्सीनोमा) छ। यसको उपचारका लागि उनले बेलायतमा किमोसमेत लिएका थिए।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गएको नोभेम्बर २१ मा बेलायत गएका डाक्टर देवकोटा ६ महिनासम्म बेलायतमै उपचार गराए। तर त्यहाँ स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि देवकोटा वैशाखको दोस्रो साता नेपाल फर्किएका थिए।
डा. देवकोटालाई जन्मघरमा दुई घण्टा राखेपछि दिउँसो हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं फर्काइएको छ। शुक्रबार राति देवकाटाका बारेमा अपवाह फैलिएपछि अस्पताल तथा देवकाटाका परिवारमा तनाव भएको थियो।
अस्पताल प्रशासनले शनिबार बिहान प्रेस विज्ञप्ति निकालेको थियो। देवकोटा उपचाररत रहेको पुष्टि गर्न अस्पताल परिसरमा समेत निकालेको थियो। डा. देवकोटा पाँच महिनासम्म बेलायतमा उपचार गरेर स्वदेश फर्किएका हुन्। बेलायतबाट स्वदेश फर्किएपछि देवकोटालाई सिधै न्यूरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।